10 kwesịrị-nwere iPhone nhicha égwu
Nhicha gị iPhone majorly na-adabere na otú ị ịchọpụta ya ebe nchekwa ojiji na otú oru oma na diagnostic ngwá ọrụ ị na-eji bụ. N'okpuru bụ ụfọdụ ihe nke oma diagnostic na njikarịcha ngwaọrụ nke pụrụ inyere gị melite arụmọrụ nke gị iPhone na ala.
iPhone ihicha ngwa No 1: ebe nchekwa & Disk nyocha Pro
Mepụtara site Phan Minh Nhut, Memory & Disk nyocha Pro ọrụ akpaghị aka. Ihe niile ị chọrọ bụ, wụnye ngwa na gị iPhone na-ahapụ ya na-agba agba. Ebe nchekwa & Disk nyocha Pro-akpaghị aka na-enyocha maka na deletes achọghị junk faịlụ na-eme ruo ekwentị na ebe nchekwa na-enye gị kacha ọrụ ahụmahụ.
-Enyocha kwa na ebe nchekwa na nchekwa-akpaghị aka mgbe ngwa amalite, na ewepu na-achọghị na junk faịlụ.
Nịm kacha nta uru maka ego nke Ram na ka ebe nchekwa & Disk nyocha Pro free elu kwuru na ohere-akpaghị aka.
Nịm kacha uru maka ego nke Ram na ka ngwa onwe elu kwuru na ohere-akpaghị aka.
Nchekwa onwe njikarịcha.
Kacha nta na kacha ntọala ka onwe ebule ahụ.
Ebe nchekwa & Disk nyocha Pro bụghị free.
iPhone ihicha ngwa No 2: ọkwa ebe nchekwa
Ebe nchekwa Ọnọdụ, ọzọ iPhone ihicha ngwa mepụtara Kanako Homma-enye gị ohere nyochaa ọnọdụ nke ebe nchekwa ekwentị gị. Ihu dị ka ebe nchekwa na Filiks na ngwa na-egosipụta ihe ọmụma banyere eji na ebe nchekwa na onye ọrụ-butere Filiks na na-agba na ndabere, ebe nhicha interface-enye gị ohere hichaa ebe nchekwa na chupu na-achọghị-agba ọsọ usoro iji melite ekwentị arụmọrụ.
Single-mgbata iji nweta ihe ọmụma nile banyere ebe nchekwa ojiji.
Single-mgbata iji nweta niile na ihe ọmụma banyere na-agba ọsọ Filiks.
Single-mgbata chupu na-agba ọsọ Filiks.
Single-mgbata iPhone njikarịcha.
Mgbe ụfọdụ ọkwa ebe nchekwa rụchara onwe ya mgbe egbu na-agba ọsọ Filiks.
iPhone ihicha ngwa Ọ dịghị 3: SYS Arụ Ọrụ Manager
A ngwaahịa site Appsware, SYS Arụ Ọrụ Manager-enye gị ohere nyochaa ihe niile usoro ozi dị ka ebe nchekwa ojiji, Ram oriri, wdg n'ime onye ọrụ-enyi na enyi interface na-enye gị nduzi kwesịrị ekwesị ịrụ njikarịcha aga-eme na gị iPhone.
Na-agwa banyere ndabere Filiks na ngwa.
Monitors na LTE, 3G, na netwọk Wi-Fi ọsọ.
Onyeōzi nnọchiteanya nke iPhone ọnọdụ.
Mfe na-aghọta interface.
Complete usoro nlekota oru.
Na-achọ akwụkwọ ntuziaka aka na-ebuli iPhone.
iPhone ihicha ngwa Ọ dịghị 4: IAssistant
A free ngwa site Life On Touch, IAssistant-enyere gị aka nyochaa ebe nchekwa, CPU, na batrị ojiji nke gị iPhone. Otu mfe na-eji interface-enye gị ohere iji lelee usoro ahụ ike na ndabere nke oriri nke akụ nke gị iPhone.
Akwụkwọ ndenye ego usoro ahụ ike.
Monitors batrị ojiji.
Monitors CPU ojiji.
Ike nke na nlekota n'ozuzu ike gị iPhone.
Nwere njirimara-enyi na enyi interface.
Dakọtara na fọrọ nke nta niile iOS ngwaọrụ.
Manual aka dị mkpa n'ihi na iPhone cleanup.
iPhone ihicha ngwa Ọ dịghị 5: bytes (ebe nchekwa)
A ngwaahịa nke nlaazu égwu LLC, bytes (ebe nchekwa) bụ dị iche iche si ya ndị ọzọ na asọmpi. N'adịghị ka ndị ọzọ, bytes wepụtara na-egosiputa ego nke usable ebe nchekwa. Dị otú ahụ na ihe ọmụma, ị nwere ike mfe gbakọọ na chupu achọghị Filiks ma na-agba ọsọ ngwa iji melite arụmọrụ nke gị Apple ngwaọrụ.
The table-agba ọsọ usoro-enye gị ohere ịhụ ọnụ ọgụgụ nke Filiks na-agba ọsọ na i nwere ike kwụsị ka kwa gị mma.
Wepụtara na free ego nke ebe nchekwa, na-eme ka ị na-amata na n'ozuzu arụmọrụ.
Wepụtara na ngosipụta otú ihe na ebe nchekwa dị.
Egosiputa-agba ọsọ usoro ke onye ọrụ-enyi na enyi interface.
Manual aka dị mkpa iji na ọcha ahụ na ebe nchekwa.
iPhone ihicha ngwa Ọ dịghị 6: Battery Doctor
Mepụtara site KS Mobile, Inc., batrị Doctor nwere ike-atụle otu-nkwụsị ahịa gị niile iPhone njikarịcha mkpa. The ngwa wepụtara na iwesa ego nke Ram na nchekwa na-enye gị ohere ọcha ngwaọrụ gị na ala.
Egosiputa n'ozuzu usoro ike okwa na isi interface.
Enyere gị ọcha junk faịlụ.
Enyere gị mbo mbuli na ekwentị gị si ebe nchekwa.
Easy ekwentị njikarịcha.
Na oge nke a edere, Battery Doctor bụ dakọtara na iOS 8.0.3 na n'elu.
iPhone ihicha ngwa Ọ dịghị 7: ekwentị Expander
Ma na ekwentị ọzọ Cleaner-enye gị ohere nnukwu-wepụ arụnyere ngwa, wepụ usoro cache, na-ewepụ photos mgbe na-akpaghị aka na-akwado ha elu na gị na PC. Onye ọrụ-enyi na enyi interface nke ekwentị Expander achọ ọ ọkachamara ọzụzụ ma ọ bụ tupu oru ihe ọmụma.
Easy usoro cache mwepụ.
Akpaka image azụ n'ihu mwepụ.
Nnukwu ngwa mwepụ.
Rụrụ multiple aga-eme.
Enye ohere mfe iPhone njikarịcha.
Ekwentị Expander ka na beta na-adọ na oge nke a edere.
iPhone ihicha ngwa Ọ dịghị 8: Wondershare SafeEraser
Otu oru oma ngwá ọrụ mepụtara Wondershare, SafeEraser bụghị nanị ọcha gị iPhone rụọ ọrụ nke ọma ma ọ na-enye gị ohere iji na-adịgide adịgide ihichapu onwe gị data site na ekwentị gị ma mee ka ọ irrecoverable kwesịrị ị na mgbe chọrọ pụrụ ngwaọrụ gị anya.
Ọcha junk faịlụ.
Ewepu ejibeghi ngwa.
Compresses photos ịzọpụta ohere nchekwa.
Na-eme ka ehichapụ faịlụ irrecoverable.
All atụmatụ nwere ike-enweta site na otu interface.
Dakọtara na ma Windows na Mac nyiwe.
Wondershare SafeEraser bụ a ụgwọ ngwa.
iPhone ihicha ngwa No 9: ebe nchekwa 100% Pro
Ebe nchekwa 100% Pro site Cocopok bụ ihe iPhone njikarịcha ngwá ọrụ na-Monitors, dị ọcha, na optimizes ekwentị gị nchekwa ntọt ya n'ozuzu ya ịrụ ọrụ. Ọ bụ ezie na ngwa na-abịa na a price mkpado, ọ bụ uru ọ bụla pasent na ị na-etinye ego na ya.
Monitors Filiks nke gị iPhone.
Ngosipụta akowaputara ebe nchekwa ọnọdụ.
Enye gị ohere iji hichaa ebe nchekwa na-ebuli gị iPhone mfe.
Na-enye zuru ezu usoro ọmụma.
Ebe nchekwa 100% Pro bụ a ụgwọ ngwa.
iPhone ihicha ngwa Ọ dịghị 10: ebe nchekwa Doctor
Ebe nchekwa Doctor, a ụgwọ ngwa site Blue Yabasị Soft, Inc.,-enye gị ohere iji gosipụta na jikwaa ebe nchekwa nke gị iPhone rụọ ọrụ nke ọma. Eji na ọtụtụ mba gafee ụwa, na-eji ngwa bụ oke itunanya bara uru mgbe ọ na-abịa optimizing ekwentị gị.
Egosiputa Free, adịghị arụ ọrụ, na-arụsi ọrụ ebe nchekwa ọnọdụ.
Ngosipụta na-agba ọsọ Filiks.
Ngosipụta na-agba ọsọ ngwa.
Easy na onye ọrụ-enyi na enyi interface.
Monitors gị iPhone kpamkpam.
Egosiputa ọkwa ebe nchekwa na mfe na-aghọta ụzọ.
Ebe nchekwa Doctor bụ a ụgwọ ngwa.
N'agbanyeghị na ụfọdụ nke ngwa tụlere n'elu na-akwụ ụgwọ, na free ndị ka na-oru oma. The price maka ngwa ọdịnala na-adabere na mpaghara, ụdị otu, na mmepụta eri nke usoro ihe omume.
10 Best ekwentị Clean égwu
10 Alternatives ọcha nna ukwu maka Android
> Resource> Clean-elu> 10 kwesịrị-nwere iPhone nhicha égwu